कसरी गर्मी कोठालाई शीतल बनाउन सकिन्छ होला ? अपनाउनु होस् सजिलो उपाय ! – Jagaran Nepal
कसरी गर्मी कोठालाई शीतल बनाउन सकिन्छ होला ? अपनाउनु होस् सजिलो उपाय !
काठमाडौँ | गर्मी मौसममा दिनभर बाहिरको काम वा चर्को घामबाट राहत पाउन मानिस घरमा पुग्ने गर्दछन् । घरमा शीतल भएर गर्मीको थकान मेटाउने चाहना हुन्छ । तर घर छिर्दा समेत घरभित्र गर्मीले उकुस मुकुस हुन्छ । यस्तोमा मानिसको मस्तिष्कले पर्याप्त आराम पाउँदैन, दिक्क लाग्छ साथै शरीरमा आलस्यता समेत हुने गर्दछ । त्यसैले गर्मी मौसममा घरको कोठा शीतल पार्न आवश्यक हुन्छ । तर कसरी ?
१. घरको कोठा शीतल राख्न घरका सबै झ्याल, ढोकाहरु खुला राख्नु पर्दछ ।२. गर्मी मौसममा झ्याल र ढोकामा पातलो र पारदर्शी जाली भएको पर्दा लगाउनु पर्दछ ।
३. घरमा उज्यालो रंगको पर्दा र संम्भव अनुसार भित्तामा उज्यालो रंग लगाउनु पर्दछ ।४. बेडमा सुतीको पातलो तन्ना प्रयोग गर्नु पर्दछ ।